Wayne Rooney oo Daris la noqonaya Barack Obama iyo Gabar uu dhalay Donald Trump…..(Sidee)+SAWIRRO – Gool FM
Wayne Rooney oo Daris la noqonaya Barack Obama iyo Gabar uu dhalay Donald Trump…..(Sidee)+SAWIRRO
(Europe) 18 Maajo 2018. Kabtankii England iyo Man United ee iminka ka tirsan naadiga Everton Wayne Rooney ayaa lagu wadaa inuu daris la noqdo Madax waynihii hore ee dalka Mareykanka Obama iyo waliba gabadha uu dhalay Madawaynaha iminka Donald Trump ee Ivanka Trump.
Rooney ayaa ka fikiraya inuu u dhaqaaqo naadiga DC United ee ka ciyaarta horyaalka MLS, wuxuuna jeebka ku shuban doonaa adduun dhan 300,000 oo bound usbuuciiba haddii uu ku soo biiro.
Yeelkeede, waxaa iminka soo baxay warar xan ah oo sheegaya in laacibka ugu goolasha badan xulka England iyo Man United uu u soo guurayo guri shidan oo ku yaala Washington kaa oo qiimihiisa lagu sheegay 4.2 milyan oo bound.
Haddaba haddii ay sheekadu u dhacdo sida la sheegayo oo uu Rooney u soo dhaqaaqo Washington wuxuu daris la noqon doonaa Barack Obama iyo waliba gabadha Donald Trump ee Ivanka Trump.
SAWIRRO guriga lagu wado inuu soo dego Rooney:
Arsenal oo ku dhaw dhamaystirka saxiixa goolhayaha kooxda Bayer Leverkusen (Goorma ayeey ku dhawaaqaysaa)
Ronaldo oo hadaladaan ku yiri dhaqaatiirtii daawaynaysay si uu ugu guulaysto Ballon d'Or markii 6-aad